Hydration eriri afo, oyi azu paaki, Waterproof azu paaki - Sibo
soft oyi ， waterproof akpa ， hydration eriri afo karama egwuregwu na azu eme
Eriri afo mmiri
Akpati eriri mmiri
mara ihe banyere SIBO
Sibo Bags & Suitcases Fitings Co., Ltd. Jiniang, onye enyemaka zuru oke nke SBS Group, tọrọ ntọala na 2002. Ebumnuche mbụ anyị bụ ịghọ ebe ịzụta ihe maka ndị ahịa SIP zipa. Ná mmalite nke oruru, anyị tumadi na-enye buckles maka akpa, udọ maka akpụkpọ ụkwụ, uwe, na pullers usoro ngwaahịa. Na omimi nke ndị ahịa na ahịa, na 2003 anyị malitere ịzụlite ma na-emepụta egwuregwu n'èzí na ngwaahịa onwe anyị. Dị ka karama mmiri na usoro mmiri hydration. anyị nwere onwe anyị uzuzu-free ogbako akpaka mmepụta akara maka mmiri kalama na hydration eriri afo iji nye ndị ahịa na ndị ọzọ nhọrọ na iche iche ọrụ. Ngwaahịa SBS Sibo bụ ndị ama ama na ndị ahịa ụwa wee guzobe mmekọrịta ogologo oge na ihe karịrị ụdị 30well mara n'okwu a.
SIBO na-eduga ọkachamara emeputa nke n'èzí na ngwaahịa
Ngwa SIBO na-eso gị egwuregwu ọ bụla n'èzí
Azu Ojuju Box
SIBO ohuru ohuru ma lekọta ndi otu nchekwa gburugburu
Na abali iri-abuo na asaa nke onwa iri-abuo, na asato nke asato, na nzuko omumu a, SIBO haziri oru oma maka ezigbo ndi oru
Na June 25, 2021, Slọ ọrụ SIBO duziri ọzụzụ ndị ọkachamara n'ịgbapụta ngwa ngwa n'ịntanetị maka ndị ọrụ niile. N'ime ọzụzụ a, ndị ọrụ nke SIBO mụtara ụfọdụ ikike nnapụta mberede na tiori site na ịlele vidiyo ọnụ. N'otu aka, ọ bụ ...
Nchịkọta mmiri nke ụmụ nwoke nkịtị bụ ihe dị ka 60%, mmiri ụmụ nwanyị dị 50%, mmiri nke ndị na-eme egwuregwu dị elu dịkwa nso na 70% (n'ihi na mmiri nke akwara dị elu dị ka 75% na ọdịnaya mmiri) nke abụba bụ naanị 10%). Mmiri bụ ihe kasị mkpa compon ...